E jidere Pita na Jọn (1-4)
Mgbe ụmụ nwoke ndị na-eso ụzọ Jizọs ruru 5,000 (4)
Mgbe ndị Sanhedrin na-ekpe Pita na Jọn ikpe (5-22)
‘Anyị enweghị ike ịkwụsị ikwusa ozi ọma’ (20)
Ndị na-eso ụzọ Jizọs rịọrọ Chineke ka o mee ka ha na-ekwu okwu ya n’atụghị egwu (23-31)
Ndị na-eso ụzọ Jizọs nọ na-enye ibe ha ihe ndị ha nwere (32-37)
4 Ka ndịozi abụọ ahụ nọ na-agwa ndị Juu okwu, ndị nchụàjà, onyeisi ndị nche ụlọ nsọ, na ndị Sadusii+ bịakwutere ha. 2 Iwe ji ha maka na ndịozi ahụ na-akụziri ndị mmadụ ihe, na-ekwukwa hoo haa na a kpọlitere Jizọs n’ọnwụ.+ 3 Ha wee jide ha, kpọchie ha,+ ha anọbọọ chi ebe ahụ, n’ihi na ọ bụ ná mgbede ka ha jidere ha. 4 Ma, ọtụtụ n’ime ndị gere ntị n’okwu ahụ ghọrọ ndị na-eso ụzọ Jizọs, ụmụ nwoke niile na-eso ụzọ Jizọs wee ruo ihe dị ka puku ise (5,000).+ 5 N’echi ya, ndị na-achị ha na ndị okenye na ndị odeakwụkwọ zukọrọ na Jeruselem, 6 ha na Anas+ onyeisi nchụàjà na Kayafas+ na Jọn na Alegzanda na ndị niile bụ́ ndị ikwu onyeisi nchụàjà. 7 Ha wee kpọpụta Pita na Jọn ma jụwa ha, sị: “Ònye nyere unu ike unu ji mee ihe a? Ọ̀ bụkwa aha onye ka unu ji mee ya?” 8 N’oge ahụ, Pita jupụtara na mmụọ nsọ.+ O wee sị ha: “Unu ndị na-achị obodo na ndị okenye, 9 ọ bụrụ na unu na-ajụ anyị ajụjụ taa n’ihi ihe ọma e meere onye ngwọrọ a,+ nakwa ka unu mara onye gwọrọ nwoke a, 10 ka unu niile na ndị Izrel niile mara na a gwọrọ nwoke a n’aha Jizọs Kraịst onye Nazaret.+ Ọ bụkwa Jizọs, onye unu kpọgidere n’osisi,+ Chineke akpọlite ya n’ọnwụ,+ mere ahụ́ ji dị nwoke a guzo n’ihu unu mma. 11 Ọ bụkwa ya bụ ‘nkume ahụ nke unu ndị na-arụ ụlọ na-ejighị kpọrọ ihe, nke ghọrọla nkume ji ụlọ.’+ 12 E nweghị onye ọzọ a ga-esi n’aka ya zọpụta anyị, n’ihi na e nweghị aha ọzọ+ a na-akpọ mmadụ n’ụwa nke Chineke họọrọ ọ ga-eji zọpụta anyị.”+ 13 Ma mgbe ha hụrụ otú ọnụ si kaa Pita na Jọn, marakwa na ha bụ ndị nkịtị na-agụghị akwụkwọ,*+ o juru ha anya. Ha wee cheta na ha na Jizọs na-anọbu.+ 14 Ka ha nọ na-ele nwoke ahụ a gwọrọ ọrịa ka ya na ndịozi abụọ ahụ guzo,+ ha amaghị ihe ha ga-ekwu ekwu.+ 15 Ha wee gwa ha ka ha si n’ụlọ nzukọ Sanhedrin ahụ pụtụ. Ka ha pụrụ, ha malitere ịgba izu, 16 sị: “Gịnị ka anyị ga-eme ndị a?+ N’ihi na, n’eziokwu, ha arụọla ọrụ ebube a na-enweghị ike izochi ezochi, ndị niile bi na Jeruselem makwa gbasara ya,+ anyị enweghịkwa ike ikwu na ha arụghị ya. 17 Ma, ka anyị majaa ha ka ha ghara ịna-agwa ndị mmadụ ihe a merenụ. Anyị ga-agwakwa ha ka ha ghara ịgwa onye ọ bụla okwu ọzọ n’aha nwoke ahụ.”+ 18 Ha wee kpọọ ha ma gwa ha ka ha ghara ikwu ihe ọ bụla ma ọ bụ izi ihe ọ bụla n’aha Jizọs. 19 Ma Pita na Jọn gwara ha, sị: “Chegodịnụ ma ọ̀ ga-adị Chineke mma ka e gee unu ntị kama ige yanwa ntị. 20 Ma, anyịnwa enweghị ike ịkwụsị ikwu gbasara ihe anyị ji anya anyị hụ na ihe anyị ji ntị anyị nụ.”+ 21 N’ihi ya, mgbe ha majakwuru ha, ha hapụrụ ha, n’ihi na ha ahụghị ihe ọ bụla mere ha ga-eji taa ha ahụhụ, ha na-atụkwa ụjọ ihe ndị mmadụ ga-eme ha,+ maka na ha niile nọ na-eto Chineke maka ihe merenụ. 22 Nwoke ahụ a rụrụ ọrụ ebube n’ahụ́ ya, ya agbakee, akarịala afọ iri anọ. 23 Mgbe a hapụrụ ndịozi abụọ ahụ, ha jekwuuru ndị ibe ha ma kọọrọ ha ihe ndị isi nchụàjà na ndị okenye gwara ha. 24 Mgbe ndị niile nọ ebe ahụ nụrụ ihe a, ha ji olu dara ụda gwa Chineke n’otu obi, sị: “Ọkaakaa Onyenwe anyị, ọ bụ gị bụ Onye kere eluigwe na ụwa na oké osimiri na ihe niile dị n’ime ha.+ 25 Ọ bụkwa gị ji mmụọ nsọ si n’ọnụ nna nna anyị Devid,+ bụ́ ohu gị, kwuo, sị: ‘Gịnị mere mba niile ji na-agba ghara ghara, ndị dị iche iche ana-atamukwa ihe* na-enweghị isi? 26 Ndị eze ụwa ejikerela ka ha lụso Jehova* na onye o tere mmanụ* ọgụ, ndị na-achị achị ezukọtakwala ka otu ndị ka ha lụso ha ọgụ.’+ 27 Ihe a mezuru, n’ihi na Herọd na Pọntiọs Paịlet+ nakwa ndị mba ọzọ na ndị Izrel zukọtara n’obodo a megide Jizọs, bụ́ ohu gị dị nsọ, onye i tere mmanụ.+ 28 Ha zukọtara ka ha mezuo ihe i kwuru na ọ ga-eme. Ihe a niile mere n’ihi ike i nwere nakwa n’ihi na ọ bụ nzube gị.+ 29 Ugbu a, Jehova,* biko, leba anya ná mmaja a ha majara anyị, nyekwa anyị bụ́ ndị ohu gị ike ka anyị na-ekwu okwu gị n’atụghị egwu ọ bụla. 30 Anyị na-arịọkwa gị ka ị na-eji ike gị na-agwọ ọrịa nakwa ka a na-arụ ọrụ ebube+ n’aha Jizọs bụ́ ohu gị dị nsọ.”+ 31 Mgbe ha rịọsiri Chineke arịrịọ ike,* ebe ahụ ha zukọtara mara jijiji. Ha niile wee jupụta na mmụọ nsọ,+ na-ekwukwa okwu Chineke n’atụghị egwu.+ 32 Ndị niile na-eso ụzọ Jizọs nwere otu obi.* O nweghịkwa onye ọ bụla n’ime ha na-ekwu na nke ọ bụla n’ime ihe ndị o nwere bụ nke ya. Kama ha nwekọrọ ihe niile ọnụ.+ 33 Ndịozi gbakwara àmà otú dị mma na a kpọlitere Onyenwe anyị Jizọs n’ọnwụ.+ Chineke mekwara ka amara ya baara ha niile ụba. 34 N’eziokwu, e nweghị onye n’ime ha ihe kọrọ,+ n’ihi na ndị niile nwere ala ma ọ bụ ụlọ na-ere ha ma na-eweta ego ha retere. 35 Ha na-ewetara ya ndịozi,+ ha ana-enye onye ọ bụla ego ọ ga-eji gboo mkpa ya.+ 36 Josef, onye ndịozi na-akpọkwa Banabas+ (nke pụtara “Nwa Nkasi Obi”), onye Livaị a mụrụ na Saịprọs, 37 nwere ala. O rere ya ma wetara ndịozi ego ya.+
^ Ya bụ, na ha agaghị ụlọ akwụkwọ ndị rabaị. Ọ pụtaghị na ha bụ ndị itibọrịbọ.
^ Ma ọ bụ “ana-atụgharịkwa uche n’ihe.”
^ Ma ọ bụ “Kraịst.”
^ Ma ọ bụ “kpesiri ekpere ike.”
^ Na Grik, “otu obi na mkpụrụ obi.” Gụọ Nkọwa Okwu.